लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध निकै सरल र निकै जटिल कुरा हो । सम्बन्धका आधारहरु पनि उत्तिकै सरल र जटिल हुन्छन् । शायद ती आधारहरु बढीभन्दा बढी बिश्वास नै हुन् । जब विश्वासमाथि संकट उत्पन्न हुन्छ, सम्बन्धमा दरार पैदा हुन्छ, तब सम्बन्धहरु बिग्रन थाल्छ्न्, भत्कन थाल्छन र टुक्रिन्छन् ।
लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध पनि ठिक त्यस्तै हो । कसको छोरा, कसको छोरी, बेग्लै परिवार, बेग्लै समाज, बेग्लै रीतिरिवाज, बेग्लै धर्म, संस्कृति, जात र सम्प्रदायका केटाकेटीबीच भावनात्मक सम्बन्ध कायम गरेर बिहे गरिन्छ । लोग्ने र स्वास्नीबीच धेरै कुराहरुमा समझदारी हुन्छ । त्यस्ता समझदारीहरु सबै विश्वासमा गरिन्छन् । दुईजनाको जिन्दगी त्यतिञ्जेलसम्म सङ्गै जान्छ, जतिञ्जेल विश्वास टिकिराख्छ, समझदारी भइराख्छ । जब सम्बन्धमा शंका उत्पन्न हुन्छ, अविश्वास उत्पन्न हुन्छ, असमझदारी सिर्जना हुन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, त्यो नाता तोडिन्छ ।
शिल्पा र छविबारे अहिले जे जति कुरा आएका छन् ती सबै अविश्वास र असमझदारीका कारण आएका हुन् । उनीहरुबीच समझदारी थियो, बिहे भयो । होला त्यहाँ थुप्रै समस्याहरु थिए । छविको रेखासङ्ग सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो । त्यसअघि उनले तीन बिहे गरेका थिए भने छविकै अनुसार शिल्पाले दोस्रो बिहे गरेकी हुन् । शिल्पा र छविबीच उमेरको अन्तर थियो । यी सबै कुरा हुँदाहँुदै पनि उनीहरुबीच विवाह भयो । विवाह यसकारण भयो कि उनीहरुबीच समझदारी भयो । तर अहिले त्यो समझदारी निकै टाढा पुगिसकेको छ ।
शिल्पा र छविबारे बजार र मिडियामा धेरै कुराहरु आएका छन् । कतिले छविको समर्थन गरेर शिल्पालाई गाली गरेका छन् । कतिले शिल्पालाई समर्थन गरेर छविलाई गाली गरेका छन् । वास्तवमा सत्य के हो ? त्यो उनीहरुलाई नै थाहा छ । उनीहरुको विगत हेरेर गल्ती कसको हो ? छुट्याउन सकिँदैन । हिजो उनीहरुले बिहे गर्दा दुबै एक अर्काका लागि प्रिय थिए । भनेका थिए, जिन्दगीभर हामी एक अर्काको लागि बाँच्छौ । तर अहिले त्यसको ठिक विपरीत मुद्दा प्रहरी र अदालत पुगिसकेको छ र सम्बन्ध विच्छेदको चरणमा छ । उनीहरुलाई सर्वोत्तम लागेको विगतलाई हेरेर उनीहरुको पक्ष र विपक्षको बहस गर्नुमा कुनै तुक छैन । न त अब पछिको भविष्यको कुनै अड्कलबाजी गरेर नै आगामी सम्बन्धको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । हुनसक्छ भोलि फेरि उनीहरु सङ्गै पनि त हुन सक्छन् । एक अर्कोप्रति गुमेको विश्वास कायम गराउन सके भने त्यो पनि के बेर ?
वास्तवमा लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध निकै जटिल सम्बन्ध हो । उनीहरुको ब्यक्तिगत सम्बन्धको विषय जान्ने र जान्न पाउने अधिकार कसैलाई हँुदैन । के गर्यो, के गरेन ? के भयो, के भएन ? यी अर्को व्यक्तिलाई जान्नुपर्ने कुरा होइनन् । सम्बन्ध राम्रो छउन्जेल उनीहरुबीच भएका सबै कुरा बैध हुन्छन् । जब कुरा मिल्दैन धेरै कुराहरु निस्कन्छन् । ती कुरालाई त्यसरी नै लिनुपर्छ । केही वर्ष पहिले एकजना चर्चित हाँस्य कलाकारसङ्ग सम्बन्ध बिग्रेपछि उनको श्रीमतीले भनेकी थिइन् कि मैले उहाँको भित्री कपडा पनि धोएँ । सम्बन्धमा छँदा त्यसो गर्नु सामान्य कुरा भयो । जब इस्यु आयो, असमझदारी भयो अनि पहिले राम्रै भएको कुरा पनि ‘ए भित्री कपडा पनि धुन लगाउने ? त्यस्तो ?’ भन्ने कुराहरु आए ।
विश्वका शक्तिशाली नेताहरु नरेन्द्र मोदी होऊन् कि डोनाल्ड ट्रम्प । इमरान खानले पनि व्यक्तिगत जिन्दगीमा त्यस्ता समस्या व्यहोरेकै छन् । व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी स्वतन्त्रतापूर्वक बिताओस् । अरुलाई के को चासो ?
त्यसकारण यहाँ मैले लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध जटिल किन भनेको भने यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । छवि र शिल्पा सङ्गै बस्न पनि सक्छन्, छुट्टिन पनि सक्छन् । यो उनीहरुको निजी कुरा हो । समाजलाई देख्दा छवि शिल्पा सङ्गै बसेको राम्रो देखिन्छ तर समाजलाई के राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा होइन । कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आफ्नो जिन्दगीको हो । आफू खुशी हुने कुरा हो । व्यक्तिगत जिन्दगी अरु कसैको टाउको दुखाइको विषय होइन । होला, उनीहरु सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्ति होलान् तर त्यस्ता व्यक्तिको पनि आफ्नो जीवन हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो पारिवारिक जीवन आफ्नै तरिकाले बिताउन स्वतन्त्र छन् । त्यसकारण उनीहरुको पक्ष र विपक्षमा उचालिनु र पछारिनुको कुनै अर्थ छैन ।
लेखक अखिल (छैठौं)का केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।